Dhalinyarada Magaalada Muqdisho qaarkood oo ku mashquulsan barashada Luqada Turkiga (Warbixin) « AYAAMO TV
Dhalinyarada Magaalada Muqdisho qaarkood oo ku mashquulsan barashada Luqada Turkiga (Warbixin)
769 Views Date March 29th, 2014 time 4:34 pm
Qaar badan oo kamid ah Dhalinayardaa ku dhaqan Magaalada Muqdisho oo isugu jira Wiilal iyo gabdho, ayaa mudooyinkan dambe waxa ay bilaabeen in ay bartaan Luqada Turkiga oo lagu dhigo Iskuulo gaar ah oo kuyaala Muqdisho.
Turkida kusugan Magaalada Muqdisho ayaa furtay Iskuulo iyaga u gaar ah oo lagu barto Luqadooda ,kuwaa oo ku kala yaala Ex-Dugsigii hore ee Farsanada Buulo Tikniko iyo sidoo kale Dugsi Sare ee Banaadir.
Iskuuladan ayaa lagu bartaa Luqada Turkiga , waxaana dadka wax bara macalimiin dalkaasi ka yimid ,Iskuuladan ayaana ah kuwa gaar ah ay ardayda dhiibaan lacago qidmo ah oo lagu barayo Luqada Turkiga oo Koorso ah.
Luqada Af Turkiga ee lagu Barto Magaalada Muqdisho ayaa ah mid koorso Mudo sadax bilood loogu tala galay ,Ardayda ayaana bixinaysa lacag dhan boqol Dollar , Ardayda Koorsada dhigata ayaa aada Iskuuladaasi mudo 5-maalin ah isbuucii , waxaana lacagta 100-Dollar ee la bixinayo ku jirta Shahaadada hadii uu ardaygu daraasada dhameesto.
Qaar kamid ah Dhalinyarada Barata Luqada Turkiga oon la sheekeestay ayaa qaarkood waxa ay ii sheegeen ujeedka ay u baranayaan in ay tahay in ay Shaqo ka helaan Hay’adaha Turkiga ee ka howlgala Magaalada Muqdisho, qaar kale oo ardayda kamid ah ayaa iyaguna iigu waramay in ay rajeenayaan in Dalka Turkiga waxbarasho ka helaan ayna sii baranayaan luqada si ay ugu fududaato hadii ay dalkaasi tagaan.
Dowlada Turkiga ayaa Soomaaliya ka saaciday dhinacyo badan ay ugu horeeso fulinta Mashaatiic hormarineed, u gar gaarida dadkii ay saameesay abaartii dalka ku dhifaty sanado yar kahor iyo sidoo kale in Dalka Turkiga la geeyay Boqolaal arday ay la siiyay deeqo waxbarsho oo heer jaamaceed ah.